Does your baby get enough milk?How can you know? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Does your baby get enough milk?How can you know?
သင့်ကလေးနို့ဝ မဝ သင်ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ?
မိခင်နို့တိုက်တဲ့ အမေတိုင်းဟာ မိမိကလေး နို့ဝရဲ့လားဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နို့လုံလောက်စွာရမှသာ ကလေးငယ်ရဲ့ ပုံမှန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ကလေးနို့ဝ မဝအောက်ပါအချက်အလက်များနဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
-ကလေးနို့စို့တဲ့အကြိမ်ရေဟာ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၆ ကြိမ်မှ ၈ကြိမ်ရှိရပါမယ်။
-ကလေးကိုနို့တိုက်တိုင်းမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး နို့သီးခေါင်းနာကျင်မှုမခံစားရပါဘူး။
-နို့တိုက်ပြီးချိန်မှာ နို့သီးခေါင်းဟာ မူလပုံအတိုင်းသို့မဟုတ် အနည်းငယ်ရှည်ထွက်နိုင်ပါတယ်။
-နို့ဝတဲ့ကလေးရဲ့ အရေပြားဟာ တင်းတင်းရင်းရင်းရှိပါတယ်။
-ကလေးငယ်ဟာနိုးနေတဲ့အချိန်မှာ နိုးကြားလန်းဆန်းနေပါမယ်။နို့ဆာပြီဆိုရင် တောင်းတတ်ငိုတတ်ပါတယ်။
-ကလေးဟာ နို့ဝပြီဆိုရင် သူ့အလိုလိုနို့စို့တာရပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
-ကလေးငယ်ဟာ မွေးပြီး ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ ဆီး ၂ ခါမှ ၃ခါသွားပါမယ်။၅ရက်သားကျော်လာတဲ့အခါ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၆ကြိမ်သွားရပါမယ်။
Public toilets dangers